FANONDRANANA AN-TSOKOSOKO NY HAREM-PIRENENA : Zana-tsokatra 26 tra-tehaky ny zandary
Mitohy hatrany ny fanondranana an-tsokosoko ireo biby arovana eto amintsika ankehitriny. 5 avril 2018
Ny alin’ny talata teo dia zana-tsokatra miisa 26, izay saika haondrana indray no tra-tehaky ny zandary nanao fisafoana teny Ivato. Nahatsikaritra olona nampiahiahy ireo mpitandro filaminana.
Raha vao nahatazana ireto farany ilay olona avy dia nandositra ka navelany teo ny kitapo teny aminy. Rehefa nosavaina izany dia zana-tsokatra no hita tao anatiny. Nanara-dia ilay olona nitondra ireo biby izay efa azo lazaina fa lany tamingana ny mpitandro filaminana saingy tsy hita izay nanjavonany satria nidikiditra elakelan-trano ity farany.
Tsy mijanona hatreo anefa ny fikarohana io olon-dratsy io fa mbola mitohy hatramin’izao. Mba ho famongorana ny tsy fandriam pahalemana dia manao fisafoana andro aman’alina ny zandary eny Ivato ankehitriny ary efa misy mihitsy ny lamina napetrak’izy ireo hoentina hiadiana amin’ny tsy fandriampahalemana, hoy Rajakoba Christian, Lietna ao amin’ny zandarimariam-pirenena eny an-toerana.